BOOSAASO(P-TIMES) – Gudoomiyaha cusub ee gobalka Barri Cabdisamad Abwaan ayaa xalay xilka kala wareegay Gudoomiyihii hore Mr, Dhedo oo hadda ku biiray golaha Wasiiradda ee Xukuumadda uu hogaamiyo Madaxweyne Siciid Deni, ka dib markii lagu qanciyey in uu baneeyo xilka gobalka, si loo keeno shaqsi saameyn ku yeelan kara howlaha socda ee ay ka mid yihiin joogitaanka dawladda Imaaraatka Carabta ee gobalkaas iyo cabashada beeluhu ay ka qabaan in la xaliyo.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa magacaabay Cabdisamad Abwaan oo horey u soo noqday Wasiir katirsanaa Xukuumaddii Jeneraal Cadde Muuse, sidaas oo kale wuxu saameyn ku leeyahay Abwaan qaar kamid ah mashaariicda Imaaraatka Carabta ee la fulinayo, qaarkoodna ay hadda ka socdaan gobalkaas Barri.
Cabdisamad Abwaan wuxuu dhawaan kasoo muuqday kulamo looga hadlayay arrimaha fasixida Xoolaha Puntland ee dalka Imaaraatka Carabta, isagoon la aqoon jagada uu hayo balse isla kulankaas waxaa ku wehlinayay qaar kamid ah qaraabada Madaxweyne Denni oo aan xilalkooda la aqoonin.
Abwaan wuxuu soo noqday wasiirkii Ganacsiga ee Xukuumaddii Cadde Muuse Xirsi sioo oo kale wuxuu galaangal siyaasadeed xiligaas ku lahaa gobalka Barri, isagoo noqday xubin fir fircoon inkastoo loolanka looga adkaaday Xukuuamddii uu ka tirsanaa oo lagu eedeynayay in ay ahayd midkii ugu waxqabad hooseysay ee soo martay mandiqadaas oo lagu xasuusto Sicir barar-baahsan iyo Warshadaha lacagta sameeya oo la keenay Boosaaso.
Magacaabidiisii Wasiirka ganacsiga ee xiligaas waxay kusoo aaday xili sidan oo kale cabasho badan uga timi beeshiisa, sidaas oo kale ay taagnayeen cabashooyin la xariira Imaaraatka Carabta oo doonayay in ay joogitaan ku yeeshaan gobalka Barri.
Madaxweynihii xiligaas Cadde Muuse & Ganacsatada gobalka Barri oo isku qabtay arrimaha la xariiray Maxjarkii Al Jaabiri ee Boosaaso ayaa xilka loo magacaabay, wuxuuna khilaafkaas u badalay wada shaqayn uu iskugu soo dhaweeyey ganacsatada & Madaxtooyada.
Laakiin waayaha iyo siyaasadda oo isbedeshay ayuu kusoo beegmayaa waqtigan, dad badana ayaana rumeysan in uu isku xiri karo Madaxtooyada iyo bulshada gobalkaas.
Mr, Cabdisamad waa siyaasi u janjeera dhanka dawladda Imaaraatka Carabta oo hadda saameyn buuxda ku leh arrimaha gobalka Barri oo ay gacanta kaga hayaan dekedda, garoonka, Maxjarka Xanaanada Xoolaha iyo Quwada Korontada oo ay dhawaan heshiis ku saabsan la galeen Xukuumadda Puntland.
Magacaabidiisa waxaa wararku sheegayaan in ay gadaal ka riixayeen qaar kamid ah Isimadda dhaqanka ee gobalkaas iyo Saaxiibtinimada u dhaxeysay isaga iyo Madaxweynaha Puntland, waxaana kale oo qayb ka ah fahamka dheer ee ay isku leeyihiin Xukuumadda Imaaraatka Carabta.
Sidaas oo kale PuntlandTimes waxay ogaatay in magacaabidiisa ay qayb ka yihiin ganacsatada gobalka Barri oo mid kamid ah walaalo yihiin Abwaan, waxaase uu ku beegmayaa waqti adag.
Dadka yaqaana Cabdisamad Abwaan waxay ku sifeynayaan in uu yahay ruux kasoo bixi kara shaqadan laakiin caqabado badan ayaa ku wareegsan gobalka Barri, kuwaas oo leh saameyn xoog badan oo aan si fudud looga lug bixi karin waa siyaasi si fudud u adeegsada hadalada iyo maah-maahyaha ay caanka ku yihiin bulshada gobalka Barri.
Dadka dhaliila Abwaan waxay sheegayaan in uu yahay nin jilicsan sidaas oo kale aaminsan fikradda reer-Barrinimada oo ay dad badan walaac ka qabaan xiliyada qaarkood sidaas oo kale wuxuu saameyn ku leeyahay arrimaha ganacsiga ee waqtigan muranadu ka taagan yihiin.
Abwaan & Galan waxay noqon doonaan laacibiin siyaasadeed oo si dhaw uga shaqeyn doona arrimaha gobalka Barri, waxayna mudo dheer ahaayeen saaxiibo dhaw, haddana waxay markale iskugu imaanayaan Xukuumadda uu hogaaminayo Madaxweyne Deni.
Dad badan ayaa rumeysan in uu Cabdisamad Abwaan hadda dhaxli doono dajinta khilaafkii faraha badnaa ee u dhaxeeyey Xukuumadda Puntland & Bulshada gobalka Barri oo ay dhawaan meel halis badan gaaray, balse is faham labada dhinac uu ka yimi bulshada oo dhan, dawladduna waqti badan galisay sidii loo kala furfuri lahaa.